Maalinta: Sebtember 27, 2018
Ayvalik Entrance waxaa loo furay sidii Wadada Labaad
Ayvalık, oo ka mid ah xarumaha ugu muhiimsan ee dalxiiska Turkiga oo ay caanka ku tahay adduunka caanka ah ee Sarımsaklı Beach, Jasiiradda Cunda, Şeytan Sofrası iyo qurux badan oo kale oo gaar ah, ayaa ugu dambeyn la xaliyay. Balikesir [More ...]
Waaxda Gaadiidka ee Dawladda Hoose ee Magaalada Manisa, oo dardar gelisay kormeerka gawaarida rakaabka ah ee maraya magaalada Manisa oo dhan, waxay ka sameeyeen xisaab hubinta tagaasida ganacsiga ee bartamaha magaalada. Kaararka Chauffeur, cashuurta, iwm. [More ...]
Dekadda DP World Yarımca Port, oo ay kujiraan wax kabadan 4.3 Bilyan oo Doollar oo heer caalami ah, ayaa waxay martigelisay xubnihii saxaafadda ee dekada. Maareeyaha Ganacsiga iyo Xiriirka Shirkadaha Gökhan Yurteken, Macallinka Buluugga ah ee Kolonel Kenan [More ...]
Mashruuca Harameyn High Speed ​​Train Project
Munaasabadda furitaanka Mashruuca Tareenka Xawaaraha Sare ee Harameyn waxaa lagu qabtay xaflad ka hadlaysa Jeddah iyo Madiina Xawaaraha Xawaaraha Sare, halkaas oo Boqorka Sacuudiga Selman Bin Abdulaziz uu la wareegey dhismaha Xarunta Dhismaha. Waxaa lagu hayaa Jeddah Station [More ...]
Mashruuca Mashruuca Tramway wuxuu ka bilaabmay Erzincan
Mashruuca taraamka ayaa bilaabmay. Wasaaradda ayaa la siiyay qandaraaska mashruuca taraamka. Qandaraaska ayaa waxaa bixiyay shirkadda iswiidhishka ee Sweco. Shaqaalaha Wasaaradda, shaqaalaha la-tashiga iyo shirkaddu waxay bilaabeen howlo duulimaad, iyagoo aadaya dhulka [More ...]
Mersin, 3 Mashruuca Nidaamka Tareenka
CHP Serdal Kuyucuoğlu, Burhanettin Kocamaz Duqa Magaalada metroolka mashruuca nidaamka tareenka ayaa la xirey. Isagoo ku nuuxnuuxsaday in mashruucu ka dambeeyo sanadka 3, Kuyucuoğlu wuxuu sheegay in mashruucan loo gudbiyay wasaaradda in kasta oo la ogaa in mashruucan aan la aqbali doonin. CHP [More ...]
Israaiil ayaa ku burburtay Falastiin oo leh Tareenka Xawaaraha Sare
Maamulka Israel ayaa furay tareeno xawaare dheereeya u dhaxaysa magaalada Jerusalem iyo Tel Aviv. Dadku waxay ka falceliyeen tareenka xawaaraha dheereeya ee dhex maraya dhulka Falastiiniyiinta inta u dhaxaysa caleema-saarka Israa’iil ee Jerusalem iyo garoonka diyaaradaha Ben Gurion ee Tel Aviv. [More ...]
Wasiirka Turhan: ğ Decree of Liquidation ayaa geli doona maalmaha soo socda Bakan
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha, M. Cahit Turhan, marka loo eego isbedelka, horumarinta xaaladaha suuqyada, si loo ilaaliyo xuquuqda iyo sharciga dhinacyada dhinacyada si looga takhaluso cabashada Xeerka Liidida ee loo diyaariyay maalmaha soo socda. [More ...]
tareenka taas oo ah mid ka mid ah waxyaabaha soo iibsaday dibadda Turkiga, tareenka iyo baabuur giraangiraha soo saaray degaanka si KARDEMİR laga bilaabo oo ku saabsan 4 sano ka hor ugu dambeyntii maxkamadda Rail Wheel Factory Production [More ...]
3. Shaqaalaha Madaarka Caalamiga ah ee Agenda World
Hayada Ururada Ganacsiga Caalamiga ah, Ururka Caalamiga ah ee Shaqaalaha 3. warqad u diray xaalada shaqaalaha garoonka diyaaradaha. Sharab Burrow, Xoghayaha Guud ee Ururka Xiriirka Ganacsiga Caalamiga (ITUC), wuxuu u sheegay Ururka Caalamiga ah ee Shaqaalaha (ILO) 3. xaaladda shaqaalaha garoonka diyaaradaha [More ...]
Diyarbak Junr Mazıdağı Qadka Wadada Wadada Tareenka
Diyarbakır Mazıdağı (Mardin) Natiijada Khadka Tareenka Iskuxirka Jidka Wadnaha: 2017 / 665245 GCC qiimaha xaddidan ee Agaasinka Guud ee Tareenka Gobolka (TCDD) waa 307.109.631,57 TL oo qiyaasta qiyaasta ayaa ah 384.733.748,00 TL. [More ...]
100 Soo-saarista Turkiga F-Vision
4 waxaa loo habeeyay oo ay soo saartaa 4 bil kasta oo ay sameeyaan injineerada Turkiga ee xarunta weyn ee R&D R ee Sancaktepe. Baabuurkii ugu horreeyay ee koronto leh oo wata darawal iskiis u madaxbannaan, 'F-Vision' ayaa sanqadha weyn ka dhigtay adduunka oo dhan. Ford [More ...]
E5000 Soo iibsiga Adeegga Xaqiijinta Adeegyada Hubinta Qaranka ee Korontada (TÜLOMSAŞ)